ဖူးစာရှင်နှင့် တွေ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်သည့်အချက်များ…. - Khitalin Media
ဖူးစာရှင်နှင့် တွေ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်သည့်အချက်များ….
June 30, 2020 Khitalin Media အထွေထွေဗဟုသုတ 0
အချစ်စစ်ဆိုတာ ရှားပါးတယ်။ တကယ့်အချစ်စစ်ကို တွေ့ပြီဆိုရင်လည်း မျှော်လင့်ချက်တွေ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်လာပါတော့တယ်။ အချစ်စစ်က လူတွေကို ပန်းရောင်တိမ်တွေပေါ်မှာ မျော်နေသလိုခံစားရအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး အတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ တစ်ညလုံး နိုးကြားနေစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မိမိချစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့တိုင်းလည်း တစ်ဘဝလုံး ပေါင်းဖက်ရမယ်လို့ ယုံကြည်ထားလို့မရပါတယ်။ တစ်ဘဝလုံးစာအတွက် ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင် ချစ်တယ်ဆိုတာထက် ပိုတဲ့ပေးဆပ်မှုတွေ နာကျင်မှုတွေကို ခံစားနိုင်ရပါမယ်။ ဒီနေ့ kwee ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ အချစ်စစ်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ အရာတွေအကြောင်းပါပဲ။
တစ်ယောက်စိတ်ကို တစ်ယောက်က နားလည်လာနိုင်မယ်
လေ့လာမှုတွေအရ အချိန်အကြာကြီး ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ စုံတွဲတွေဟာ တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်၊ အတွေးတွေကို တစ်ယောက်က နားလည်နိုင်ကြတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါဟာ လူတစ်ယောက်ကို သိတယ်ဆိုတာထက် အများကြီးပိုပါတယ်။ စကားမပြောဘဲ တိတ်ဆိက်နေရင်တောင် တစ်ယောက်ဘာဖြစ်ချင်နေလဲဆိုတာကို နောက်တစ်ယောက်က သိနေတတ်ပါတယ်။
ဘဝမှာ အချစ်စစ်ကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ နှစ်ယောက်တစ်ဘဝ ဆိုပြီးစတင်တွေးတောလာပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းနီးပါး ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူကို အနာဂက်လျှောက်လမ်းမယ့်ခရီးလမ်းမှာ ပါဝင်စေချင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ချစ်ရတဲ့သူပါတဲ့ အနာဂက် အိပ်မက်တွေကို အတူတူပုံဖော်လာကြပါလိမ့်မယ်။ အိပ်မက်ချင်း မတူညီရင်တောင် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ နီးစပ်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းရှာဖွေလာပါလိမ့်မယ်။
တစ်နေ့တာ ပင်ပန်းလာတဲ့အချိန်တွေမှာ အချင်းချင်း အားအင်တွေယူကြလာမယ်။ တစ်ယောက်အတွက် တစ်ယောက်ရှိပေးခြင်းက ဘယ်တော့မှ အထီးကျန်တယ်၊ စိတ်အားငယ်တယ်လို့ မခံစားရစေဘူး။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့လူဆီက အားပေးစကားတွေ ကြားရတာက အရာရာ ပြီးပြည့်စုံသလို ခံစားရစေပါတယ်။
အချစ်စစ်ကို တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကလည်း ချစ်ရတဲ့သူနဲ့လျှောက်မယ့်လမ်းမှာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့အားပေးမှုကို ရယူနိုင်ဖို့အတွက် လမ်းစဖြစ်ပါတယ်။
မတူညီမှုတွေ အတွေးအခေါ်တွေကို လေးစားလာမယ်
လူတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကိုယ်စီ ရှိကြတယ်။ ဒီလိုဘဲ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့လည်း အမြဲတမ်း အတွေးတွေ တူမနေတတ်ဘူး။ ဒီလိုအရာတွေက စုံတွဲတွေအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေပဲ။ ဒါပေမယ့် ချစ်ရတဲ့သူရဲ့ သဘောထားကို လက်ခံတယ်၊ လက်မခံဘူးဆိုတာထက် လေးစားသမှုရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အတွေးတွေကို နားထောင်ပေးပြီး မတူညီတာတွေကို လက်ခံပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အခဈြစဈဆိုတာ ရှားပါးတယျ။ တကယျ့အခဈြစဈကို တှပွေီ့ဆိုရငျလညျး မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ပြျောရှငျမှုတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျလာပါတော့တယျ။ အခဈြစဈက လူတှကေို ပနျးရောငျတိမျတှပေျေါမှာ မြျောနသေလိုခံစားရအောငျ လုပျဆောငျနိုငျစှမျးရှိပွီး အတှေးပေါငျးမြားစှာနဲ့ တဈညလုံး နိုးကွားနစေနေိုငျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ မိမိခဈြတဲ့သူနဲ့တှတေို့ငျးလညျး တဈဘဝလုံး ပေါငျးဖကျရမယျလို့ ယုံကွညျထားလို့မရပါတယျ။ တဈဘဝလုံးစာအတှကျ ရညျရှယျထားတယျဆိုရငျ ခဈြတယျဆိုတာထကျ ပိုတဲ့ပေးဆပျမှုတှေ နာကငျြမှုတှကေို ခံစားနိုငျရပါမယျ။ ဒီနေ့ kwee ပွောပွပေးမယျ့အကွောငျးအရာကတော့ အခဈြစဈနဲ့တှတေဲ့အခြိနျမှာ ဖွဈပျေါလာတတျတဲ့ အရာတှအေကွောငျးပါပဲ။
တဈယောကျစိတျကို တဈယောကျက နားလညျလာနိုငျမယျ
လလေ့ာမှုတှအေရ အခြိနျအကွာကွီး ဖွတျသနျးခဲ့ပွီဖွဈတဲ့ စုံတှဲတှဟော တဈယောကျရဲ့ ခံစားခကျြ၊ အတှေးတှကေို တဈယောကျက နားလညျနိုငျကွတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။ ဒါဟာ လူတဈယောကျကို သိတယျဆိုတာထကျ အမြားကွီးပိုပါတယျ။ စကားမပွောဘဲ တိတျဆိကျနရေငျတောငျ တဈယောကျဘာဖွဈခငျြနလေဲဆိုတာကို နောကျတဈယောကျက သိနတေတျပါတယျ။
ဘဝမှာ အခဈြစဈကိုတှပွေီ့ဆိုတာနဲ့ နှဈယောကျတဈဘဝ ဆိုပွီးစတငျတှေးတောလာပါလိမျ့မယျ။ လူတိုငျးနီးပါး ကိုယျခဈြရတဲ့သူကို အနာဂကျလြှောကျလမျးမယျ့ခရီးလမျးမှာ ပါဝငျစခေငျြကွတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခဈြရတဲ့သူပါတဲ့ အနာဂကျ အိပျမကျတှကေို အတူတူပုံဖျောလာကွပါလိမျ့မယျ။ အိပျမကျခငျြး မတူညီရငျတောငျ ကိုယျခဈြရတဲ့သူနဲ့ နီးစပျဖို့အတှကျ နညျးလမျးရှာဖှလောပါလိမျ့မယျ။
တဈနတေ့ာ ပငျပနျးလာတဲ့အခြိနျတှမှော အခငျြးခငျြး အားအငျတှယေူကွလာမယျ။ တဈယောကျအတှကျ တဈယောကျရှိပေးခွငျးက ဘယျတော့မှ အထီးကနျြတယျ၊ စိတျအားငယျတယျလို့ မခံစားရစဘေူး။ ကိုယျခဈြရတဲ့လူဆီက အားပေးစကားတှေ ကွားရတာက အရာရာ ပွီးပွညျ့စုံသလို ခံစားရစပေါတယျ။
အခဈြစဈကို တှပွေီ့ဆိုတာနဲ့ ကိုယျခဈြရတဲ့ မိသားစုဝငျတှေ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြလာပါလိမျ့မယျ။ ဒါကလညျး ခဈြရတဲ့သူနဲ့လြှောကျမယျ့လမျးမှာ ကိုယျခဈြရတဲ့သူတှရေဲ့ အထောကျအပံ့နဲ့အားပေးမှုကို ရယူနိုငျဖို့အတှကျ လမျးစဖွဈပါတယျ။
မတူညီမှုတှေ အတှေးအချေါတှကေို လေးစားလာမယျ
လူတိုငျးမှာ မတူညီတဲ့ အတှေးအချေါတှကေိုယျစီ ရှိကွတယျ။ ဒီလိုဘဲ ကိုယျခဈြရတဲ့သူနဲ့လညျး အမွဲတမျး အတှေးတှေ တူမနတေတျဘူး။ ဒီလိုအရာတှကေ စုံတှဲတှအေတှကျ စိနျချေါမှုတှပေဲ။ ဒါပမေယျ့ ခဈြရတဲ့သူရဲ့ သဘောထားကို လကျခံတယျ၊ လကျမခံဘူးဆိုတာထကျ လေးစားသမှုရှိဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ သူ့ရဲ့ အတှေးတှကေို နားထောငျပေးပွီး မတူညီတာတှကေို လကျခံပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
သမီးဖြစ်သူ လာလည်တယ်လို့အိမ်မက် မက်ခဲ့ပြီး အတိတ်နမိတ်မကောင်းလို့ သွားစစ်ခဲ့ရာမှ ရင်ကွဲဖွယ်အဖြစ်မျိုးကြုံခဲ့ရတဲ့ ဖခင်-
သသှေားတဲ့ ​ကောငြ​မ​လေးပဲ လှတယြ​ထငြ​​နတော…​ရေးထားတဲ့ အ​ကှောငြးအရာ​တှကေ ပိုလှ​နတယြေ​ဗွာ…
ဖားကန့်မြေပြိုမှုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး လျင်လျင်မြန်မြန် လှူဒါန်းမှုကြီးပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ဓမ္မဒူတ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ
ယောကျြားတှကေိုစိတျနာ ဒီနရောကို အတှဲလာ ကှဲစေ ဆိုတဲ့ကြိနျစာ (သို့မဟုတျ) မိနျးမရဲ တောငျတျော သခငျမ သမိုငျး
လှဦေးတိုကျ၊ လှညျးဦးတိုကျအိမျတို့အညံ့ ကငျးအောငျလုပျနညျးနှငျ့ အိမျထောငျဦးစီး နနေံ့အလိုကျ မလှညျ့အပျသော အိမျတို့ အရပျ
သှားတိုကျဆေးမှာပါတဲ့ ကာလာကုတျ အကွောငျး